Iwaranti-I-AOOD Technology limited
Njengomboneleli ohamba phambili wokuhambisa isilingi kumbane kwihlabathi liphela, i-AOOD inee-cores ezintathu: itekhnoloji, umgangatho kunye nokwoneliseka. Zizizathu nje zokuba kutheni sinokuba yinkokeli. Itekhnoloji ephezulu kunye nomgangatho ophezulu ziqinisekisa amandla okhuphiswano e-AOOD, kodwa inkonzo epheleleyo negqibeleleyo yenza abathengi baxhomekeke kuthi.
Isitshixo senkonzo yabathengi kwi-AOOD yingcali, iyakhawuleza kwaye ichanekile. Iqela leenkonzo ze-AOOD liqeqeshwe kakuhle, linolwazi olunobuchule kunye nesimo sengqondo senkonzo elungileyo. Nayiphi na ingxaki umthengi akhankanyiweyo, iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24 nokuba ngaphambi kokuthengisa okanye emva kwentengiso.
Zonke iiyunithi zeendibano zesindululo se-AOOD ziqinisekisiwe unyaka omnye ngaphandle kweemveliso ezizodwa, ezikuvumela ukuba ubuyise nayiphi na into enesiphene endaweni yonyaka omnye ukusukela kumhla wokuthenga kwangaphambili kwi-invoyisi,
1. Ukuba kukho nasiphi na isiphene esifunyenwe kwizixhobo kunye / okanye kubugcisa, okukhokelela ekusileleni komgangatho.
2. Ukuba iringi yesiliphu yonakele ngenxa yempahla engafanelekanga okanye uthutho.
3. Ukuba isiliphu esiringi asikwazi ukusebenza ngokwesiqhelo phantsi kokusetyenziswa kwesiqhelo nangokufanelekileyo.
QAPHELA: Ukuba iindibano zeringi yesiliphu kulindeleke ukuba zisetyenziswe kwindawo eyoyikisayo okanye enobungozi, nceda wenze ingxelo ecacileyo kuthi, yiyo loo nto sinokwenza ukuba imveliso inyangwe ngokukodwa ukuhlangabezana nolindelo lwakho.